လမ်း 1: တက် — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ငါ em မှာရူးသွပ်တာပါ, ရိုက်ပုတ် MICS back စေခြင်းငှါ,
စိတ်ထဲငါဖောင်းပွတာ left ဘယ်တော့မှဆိုတဲ့အချက်ကိုစိတ်ထဲဘယ်တော့မှမ
ရှေးရှေး I'ma ထိုသို့သွားဆိုးဆိုးရွားရွားဟောက်တတ်တဲ့နေစဉ်
အကြှနျုပျ၏ဘုရားသခငျမျှလူထုပုံပြင်များမဟုတ်ပါ, '' သူကအကြောင်းရင်းအစစ်အမှန်, သူအမှန်တကယ်
ငါသည်ဤဘဝဒယ်အိုးထဲမှာတစ်ဦးကို flash ဖြစ်ပါတယ်ငျသညျပွောပွဖို့ရေးသားတာပါ
ငါတို့သည်အဘယ်သို့ထရပ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြရန်တစ် cryer လိုအပ်သည့်အခါ I'ma အနားယူ?
yo အစီအစဉ်များကို Check
အကြှနျုပျ၏ dude, ကသင်္ချိုင်းကိုသငျ့အိမျမက
သင် hack တဲ့ကိုယ်ပွားထက်ပိုပြီးဖြစ်မနေပါနဲ့?
ဒါကတစ်ဦးရဲရင့်မုသားင်, သူသည်အမြင့်ဆုံးသောအဘယ်သူမျှမနီးစပ်ခြင်းဖြင့်င်, ငါတို့ရှိသမျှသည်သေဆုံး
ယောဟနျသ 5:28,29, တရားသူကြီးကဒီမှာ!
ကားရှိမုနျ • ဒီဇင်ဘာလ 9, 2014 တွင် 12:40 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်ဤသီချင်းအပေါင်းတို့နှင့်ဂီတကိုချစ်! ဘုရားသခငျသညျသငျကနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလရဲ့အဘယ်သူမျှမလျှို့ဝှက်ချက်ကိုလက်ဆောင်တစ်ခုပေးတော်မူပြီနှင့်သင်ဘဝပေးသည်သောသူလူတွေကိုဦးဆောင်နေ! ကြိမ်ဂုဏ်နအရူးရကြောင့်ဒါဟာလှပသောအရာပါပဲ, ကျနော်တို့မြင့်တက်လျှင်မူကားဘာမျှကျွန်တော်တို့ကိုရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်.
eliassimbeye • ဒီဇင်ဘာလ 10, 2014 တွင် 8:54 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကိုယ်ကတန်ဖိုးရှိခဲ့တဲ့အယ်လ်ဘမ်နွားများပြီးနောက်သူတို့အားဤနေရာတွင်ဇမ်ဘီယာကနေအစွမ်းထက်သီချင်းစာသားလူကိုနံနက်ဖြစ်ကြပြီးသီချင်းတွေကိုသင်ဈခက်တဲ့ week.anyway များအတွက်အလုပ်လုပ်ရန် download.so ဖို့ပိုက်ဆံပြုစုပျိုးထောင်ရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ခက်ခဲ.
PastorTony • ဒီဇင်ဘာလ 11, 2014 တွင် 10:45 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီယောက်ျားတွေဂီတကိုချစ်!! တကယ်ပဲဘာတစ်ခုမှ Manassas Va ၌ငါ့ဘုရားကျောင်းကသူ့ကိုရ. ဘုရားသခငျသညျအဘို့အဘယ်သို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ!
မော်ဂန် • ဒီဇင်ဘာလ 31, 2014 တွင် 12:59 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါဖြစ်၏ 14 နှင့် im နေဆဲသူကိုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သောဘုရားဖြစ်ပေါ်မြှောင်,သူအစစ်အမှန်င်သို့မဟုတ်မပါလျှင်. ကြှနျတေျာ့အသက်အရွယ်လူတိုင်းမသေချာဖြစ်ပါတယ်မှာငါသိ, ဒါပေမယ့်ငါတကယ်အချို့ဖြစ်ချင်တယ်. သူကငါ့အဘို့အရာတွေအများကြီးပြုတော်မူပြီနဲ့ကျွန်မသံသယဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကသီချင်းငါတော့ဘူးမသေချာမရေရာဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးသင်သိရဖို့ကျွန်မကိုကူညီပေးခဲ့တယ်.
Oluwafemi • ဇန္နဝါရီလ 29, 2015 တွင် 1:14 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ် lee ငါ့ထံသို့ကြီးမားတဲ့လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပါသည်. မည်သို့ဈတစ်နေ့နေ့မှာသင်တို့ကိုအဘယ်သူဖြည့်ဆည်းဖို့ကိုချစ်. hir ဝင်ပြီးလူတွေကကျနော်တို့ကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ရောနှောပြုမူငါ့ကိုပြောပြ. သငျသညျဘုရားသခငျ၏လက်၌ထိုကဲ့သို့သောအစွမ်းထက်တူရိယာများမှာ. ဘုရားသခငျသညျသငျသညျညီအစျကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ!
PhantomL82 • အောက်တိုဘာလ 13, 2015 တွင် 9:49 ညနေ • ပြန်ကြားချက်